Louisiana mijery ny hampitombo ny China ara-barotra - China Yangzhong Luck Star kase
Manosika fahaizana amin'ny diloilo, simika famokarana sy mijery mialoha ny fiaramanidina sy aerospace
Louisiana te parlay ny hery diloilo sy mandatsa-dranomaso sy simika voajanahary famokarana ho fanitarana varotra nisaraka tamin'i Chine, araka ny fanjakana ny manam-pahefana ambony ny fampandrosoana ara-toekarena.
Don Pierson Notendrena Louisiana sekreteran'ny Fampandrosoana ara-Toekarena rehefa John Bel Edwards lasa governora tamin'ny Janoary. Pierson hoy ny fanjakana mikasa ny hanao nentim-paharazana ao amin'ny orinasa - famokarana angovo sy simika, ala sy ny orinasa mpamokatra entana.
"Isika koa dia manaiky ho avy matoky ny fahafahana eo amin'ny fiaramanidina sy ny aerospace, IT sy ny fitantanana ny rano," hoy izy tao anaty tafatafa tao New York ny Talata.
Trade eo Louisiana sy i Shina efa mandroso. Nanomboka tamin'ny 2008, Louisiana no laharana voalohany any Etazonia in isan'olona fampiasam-bola mivantana avy any ivelany, sy ireo orinasa Shinoa no nandray anjara lehibe.
Shina no faharoa lehibe indrindra any Louisiana mpampiasa vola.
Shina misolo tena ny ambony Louisiana tsena fanondranana, ary mihoatra ny $ 8.6 lavitrisa amin'ny fanondranana entana tamin'ny 2014, ambony Louisiana No. 4 eo US milaza ao amin'ny fanondranana ho an'ny tanibe.
Pierson hoy misy faritra roa izay toa tsy tena mahabe fanantenana noho ny fanitarana ny varotra eo amin'ny fanjakana sy Shina. Ny iray dia mamokatra feedstock simika toy ny methanol, izay no takina mba mpanamboatra vokatra simika.
Tafiditra iray hafa ZARY RANO ny famokarana entona voajanahary, na LAV, izay noforonina rehefa entona voajanahary dia tony ny Miiba 259 degre Fahrenheit.
Tamin'ny 2014, Louisiana antoka ny fampiasam-bola ny $ 1,85 miliara avy Shandong Yuhuang Chemical Co hanana ny methanol fototra any Louisiana ny Saint-James Parish. Ary ny trano, izay tokony hamoronana asa sy maharitra 400 ny 2000 vonjimaika asa fanorenana, dia dalam-panorenana.
"Tsy ho avy mialoha izany amin'ny tsipika, ary nanomboka tamin'ny taona 2017 ny famokarana," hoy izy nanampy.
Raha ambany solika sy ny entona voajanahary misakana ny fanjakana vidiny ny famokarana angovo, ny vidin-javatra dia maimaika fotsiny ho an'ny simika raharaham-barotra.
"Ny indray mitete amin'ny vidin'ny solika dia namely faritra sasany any Louisiana mafy, rehefa roa no isan'ny mpamokatra ny solika sy ny entona voajanahary any Etazonia," hoy Pierson.
"Fa ny vidiny mirary ihany koa ny mamorona ny fahafahana, satria solika sy ny entona no feedstock ho an'ny simika famokarana ary koa ampiasaina amin'ny fitondrana ny toerana izay manufactures ny feedstock."
Shina fitomboan'ny toe-karena dia mitaky feedstock ho an'ny simika vokatra, ary Louisiana ny stratejika toerana eo amin'ny Hoalan'i Meksika, dia ataovy mora ho an'ny orinasa Shinoa ny hametraka ny famokarana ao amin'ny fanjakana, ary avy eo ny vokatra an-tsambo hiverina any Shina amin'ny alalan'ny fantsona ny fanjakana ny tambajotra, na avy amin'ny iray amin'ireo seranana, hoy Pierson.
Louisiana ny seranan-tsambo eo amin'ny rafitra lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ny 27 deepwater sy marivo-drafitra seranan-tsambo.